Laacibkii Kooxda Goodir & Xulka Gobollka Hawd Cabdikariin Sheekhaawi Oo Waraysi Xiiso Baddan Kaga Hadlay Waayihiisii ciyaareed
HomeWararka MaantaLaacibkii Kooxda Goodir & Xulka Gobollka Hawd Cabdikariin Sheekhaawi Oo Waraysi Xiiso Baddan Kaga Hadlay Waayihiisii ciyaareed
04/04/2014 Abdiwahab Ahmed
Weerar yahankii kooxda kubada cagta Goodir iyo xulka Gobollka Hawd Cabdikariim (Sheekhaawi) ayaa isaga oo ku sugan wadanka Germany waxa uu waraysi xiiso baddan oo dhinacyo baddan taabanaya kaga hadlay waayihiisi kubada cagta.
Laacibkan oo ka mid ahaa weerar yahanadii ugu fiicnaa sannadihii ugu dambeeyay Dalkeena gaar ahaan Caasimada Hargeysa, ayaa ku dhashay Magaalada Gebilay sannadkii 1989-kii, dhererkiisu waa 1.87mitir halka culeyska miisaankiisu uu hada yahay 72kg. Haddaba hadaan intaas kaga soo gudubno warbixintaas kooban ayaa waxa uu waraysigii u dhacay sidan.
Goormaad bilawday kubada cagta?
Waxaan bilaabay ciyaarista kubada cagta anigoo aad u da’ yar.
Waxaad nooga war-bixisaa kooxihii aad ku soo hanaqaaday ilaa intii aad soo shaac baxaysay?
Inkasta oo ay badnaayeen laakiinse kooxdii aan ku soo hano qaaday ee la igu bartay waxay ahayd kooxdii Hoobaan Net, oo aan heerkii saddexaad iyo labaadba u soo ciyaaray iyadoo kooxaha kale ee Horseed, Super Match, Somaliland Tv aan iyagana wakhtiyo fiican la soo qaatay.
Goormay ahayd markaas markii aad kooxaha Heerka labaad ku soo biirtay?
Waxay ahayd sannadkii 2006-dii.
Wakhtigaagi heerka labaad ciyaartoydii aad isku kooxda ahaydeen yaad ka xusi kartaa?
Waxaan ka xusi karaa Maxamuud Xuuto, Kabtan Xato, Maxamed Kalcase, Suldaan Cabdi Xasan, Sharmaarke Axmed Cumar, Maxamed Cali Haybe Ufo, Mukhtaar, Khaalid Diiga, Dahabshiil, Maxamed Somaali, Maxamed Gaabane, Khadar Dhayne iyo qaar baddan.
Kooxaha Heerka koowaad goormaad ku soo biirtay?
Waxaan ku soo biiray sannadkii 2009-kii, waxaana u soo wareegay kooxda heerka koowaad ee D.H.H.
Maxaa kugu kalifay inaad kooxda D.H.H ku soo biirtid oo aad kooxaha kale ugu biiri wayday?
Waxaa igu kalifay waxay ii ahayd marxalad aan kaga soo gudbayay heerkii labaad oo aan iminayay heerka koowaad, waxaana ay ii ahayd dedaal iyo talaabo aan kor u qaaday, laakiin markii dambe waxaan u wareegay kooxda Goodir oo markaad ciyaartoy tahay wax baddan ayaad qiimaynaysaa, runtii koooxda Goodir waxaa i soo jiitay xiisahooda aniguna maan dayicin jaaniskii sababta oo ah Goodir xagayga waa Madrida Somaliland.
Difaacii kuugu halista baddnaa ee aad ka sii war-wari jitay marka uu kaa soo horjeedo yuu ahaa?
Runtii waxaa igu ahaa difaaca adag ee aan aad uga war-waro Maxamed Xasan Maxamed (Gabyaaye).
Waxaad noo kala sheegtaa ciyaartii kuugu xumayd iyo tii kuugu farxada baddnayd?
Waxay ahayd ciyaartii iigu xumayd kulankii dhex maray Gobollka Maroodi-Jeex iyo Hawd ee Finalkii ciyaaraha Gobollada ee Maroodi-Jeex naga guuleysteen, tii iigu farxada baddnaydna waxay ahayd kulankii aanu Finalka ku tagnay ee Gobollka Daad-Madheed aan ka badinay.
Naanaysta Sheekhaawi sidee ayay kugu baxday?
Kkkkkkkkkkkkk, Runtii markaan soo baxayay aad ayaan u dedaali jiray si aan u kasbado dadka, ka dib Isbirat ayaan ku ciyaari jiray waanan akhlaaq wanaagsanaa markaan ciyaarayo ka dib habeen ayaa waxa wada ciyaaray xulka Tunisia iyo Cameroon, ka dib 1-0 iyadoo ciyaartu marayso ayuu gool dhalinyaya Yasin Sheekhaawi oo 9 u watay Tunisia markaas ayuu habeenka Cusaam Shuwaali aad magaciisa ula dhacay oo ugu cel-celinayay, waxaana maalinimadii dambe galabteedii wada ciyaarnay rag aan ka xasuusto Jamaal Jante, Siciido, Farxaan Bookh, Cumar Herny, Samatar ka dib markaas ayay ii bixiyeen oo waxaa weliba ii bixiyay Xasan Cismaan (Tababarihii hore ee kooxdii White Sand Village).
Fursadii kuugu darnayd ee aad gool u sarifi lahayd ee kaa khasaartay tee ayaad ku tilmaami kartaa?
Waxaan ku tilmaami karaa fursadii iigu xumayd nolashayda rigoore aan khasaariyay kulan ay iska hor yimaadeen kooxdaydii Goodir iyo Gaashaan.
Dhanka afka hore ee weerarka yaad jeclayd inay kaa bar-bar ciyaaraan?
Waxaan jeclaa inaan afka hore ee weerarka isku weheshano ama aan garoonka wada galno Amiin Xirsi (Cristiano Ronaldo), Haybe Good Hurre, Maxamuud Goofindhe, Sharmaarke Yaakhii, iyo Khadar Cristiano.
Goolhayihii kugu adkaa ee aanad jeclaysan jirin inuu kaa soo horjeesto kee baad ku tilmaami lahay?
Kkkkkkkkk waa su’aal dhawr jeerna igu soo noqnoqotay oo aan asxaab baddan kala kulmay, laakiin ninka aanan jeclaysan jirin ee aan ka sii wer-weri jiray inuu iga soo horjeesto wuxuu ahaa Cabdi Muuse.
Tababarayaashii ku soo layliyay yaad ka tilmaami kartaa?
Waxaan ka xusi karaa macalinkii iigu horeeyay Iid ee watay kooxdii Hooban Net, Maxamuud Goofindha, Siciid Ango, Maxamed oo ahaa tababarihii kooxdii Super Match, iyo macalimiinta waa weyn waxaan ka xusi karaa macalin Faysal Dheere Alle ha dayee iyo macalin Maxamed Gadaraawi iyo Aadan Daanyeero, laakiinse waxaan aad ujeclaa inuu macalin ii noqdo midkood Iid Jibriil ama Axmed Cali.
Goolashaada goolkee ayuu ahaa goolka aanan marnaba maskaxdaada ka bixi karin oo aad xasuusnaan kartid?
Runtii inkasta oo ay jiraan goolal xasuustayda ku baddan, laakiin waxaan aanan marnaba ilaabi karin oo aan xasuusnaanaya Goolkiii aan ka dhaliyay kooxdii Magaalada Jig-jiga.
Maxaad Neceb tahay?, Maxaad Jecesahay?, Maxaadse ka baqataa?
Waxaan jecalahay inaan Quranka akhristo, waxaan necebahay inaan filimaanta daawado, waxaanan ka baqaa Maska.
Waxaad tartankii Gobollada ee ka Qabsoomay Burco u ciyaaraysay Gobollka Maroodi-Jeex, maxaa kugu kelifay inaad tartankii Gobollada ee ugu dambeeyay aad u ciyaartid Gobollka Awdal?
Waxaa keliya ee igu kallifay inaan Gobollka Hawd u wareego oo aan u ciyaaro waa Goboll qiima leh oo tariikh ku yeeshay ciyaaraha Somaliland, runtii qofka janisku mar ayuu soo mara intuu ciyaartoy yahay, jaaniskana la iskama lumiyo waxaan ku fikiray ha ka fadhiisan adigoon funaanada Hawd xidhan taasna waan ku guleystay, mideeda kale dadka hawd taageera ilaa Maanta oo aan joogo wadanka Germany gaar ahaan Gobollka Munich aad baa la i soo dhaweeyaa had iyo jeer qofkii maqla waa Sheekhaawi wuu i casuumaa, runtii waxaan xasuusta in dadka i tageera inay iga soo cawiyeen inaan Jarmalka imaado, waxaanan leeyahay qalbigayga meel gaar ah ayaad ku leedihiin Insha Allaah tartanka soo socdana waynu ku guuleysanaynaa, hadaanu nahay dadka qurbaha joogana hiil iyo hooba waynu la garab taaganahay Gobollka Hawd.
Taageerayaasha Gobollka Hawd meel kasta oo ay dunida ka joogaan way ka xumaadeen ka bixitaankaaga Wadanka, maadaama oo aanad u ciyaarayn Tartanka Gobollada taas maxaad ka odhan lahayd?
Runtii aniguba jacaylka aan taageerayaasha u qabo daraadood ayaan Gobollka Maroodi-Jeex uga imiday, waydaan u qalantaan intaas inta ka dhiman noloshaydana idin ilaawi maayo markaad magacayga ku dhawaqayseen runtii waxaan dareemayay inaan ku saxsanaa inaan ku soo biiro Gobollka Hawd wanaag ayaan idiin rajaynayaa iyo guul.
Kooxda Goodir markaad ahayd kooxdee ayaad jeclayd inaad ka hor tagtaan?, kooxdeese aad necbayd la ciyaaristooda?
Horta dhamaan kooxaha Caasimadu xushmad ayay iga mudan yihiin, laakiinse markasta waxaad eegaysa kooxda sida gaarka ah kuu qaab ciyaareed taqaana taasina waxay ahayd kooxda D.h.H, waxaanan jeclaa inaan ka hortagno kooxda Gaashaan.
Markaad kooxda Goodir u soo wareegaysay waxaad ahayd kooxda D.H.H maxaa sabab u ahaa inaad u soo wareegtid kooxda Goodir?
Runtii yaraantaydii ayaan jeclaa inaan u ciyaaro kooxda Goodir, oo aan u buuxiyo booskii Diito salaan sare ayaanan hawada u soo marinaya, taas ayaa igu kaliftay waayo qof kasta hami ayuu leeyahay kana qoomamayn maayo inaan u wareegay Goodir laakiinse xushmad weyn ayaan u hayaa kooxda D.H.H, waayo anigoo heerka labaad ah ayay i soo qacan qabteen aad baad ugu mahadsan tihiin macalin Maxamed Diridhaba, Cabdi Ismaaciil, Cumar Carab, Maxamuud Goofindha, Shaafici ragas oo isoo garab qabtay inaan la qabsado.
Guulaha aad la gaadhay Goodir maxaa ka mid ahaa?
Runti waad ka war haysa wadankeena way yar tahay koobabka lagu qabto intaan u ciyaarayay 3 koob oo keliya ayaa la qabtay iyo 3 munaasibadood, laba kooxda Gaashaan qaaday midna kooxda Haboon Construction, laakiinse saddex munasibadood ayaan la qaaday midii magaalada Jig-jiga iyo mid aan ka qaadnay kooxda Duulista iyo Hawada iyo koob aan ka qaadnay kooxda Asluubta.
Wakhtigii aanay kubadaadu soo shaac bixin yaa ka mid ahaa ciyaartoydii aad ku dayan jirtay qaab ciyaaroodkooda?
Waxaan jeclaa aan aad uga heli jiray kuna dhiiranaan jiray inaan mar uun qaabkooda u ciyaaro weerar yahanadii Diito, Iid Jibriil iyo walaalkay Maxamed Gacan.
Jaa’iisadaha lagu siiyay intaad ciyaaraysay wax ma ka xusi kartaa?
Runtii heerkaygii labaad way badnayeen heerkayga koobaadna waxaan ka xasuusta billadii ciyaartoygii ugu goolasha baddna koobkii kooxaha heerka koowaad ee qabsoomay sannadkii 2011-kii.
Ciyaaraha caalamka xulkee, naadigee iyo ciyaartoygee ayaad ilaa hadda taaageertaa?
Waxaan taageeraa xulka France, ciyaartoygana laacibkii kooxda Gunners Thiery Henry, dhanka naadiyadana kooxda Real Madrid.
Wakhtigaagii kuwee ayaad u xulan lahayd 11-ka ciyaartoy ee kooxdaada Riyada “Dream Team” adigoo adna kooxdan weerarka ka mid ah?
Kkkkkkkkkk, waxaad mooda inay tahay su’aasha igu adag waraysigan, laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan kooxdayda riyada u doorto Goolka: Saleebaan Buffon Difaaca: Guuleed Alvis, Maxamed Gabyaaye, Mukhtaar Bashe, waxaana difaaca ku ciyaari lahaa saddexdaas ciyaartoy Dhexda: Guji, Jamaal Jante, Cabdiraxmaan Ilkacase, iyo Xamse Fabregas. Weerarka: Ammiin Xirsi, Haybe Good Hurre iyo aniga Sheekhawi. Waxaanan macalimiinta kooxdana u dooran lahaa Faysal Dheere ku xigeena Axmed Cali.
Tartankii ugu danbeeyay ee Gobollada yaad odhan lahayd waa Best Player?
Shakhsiyan waxaan ku tilmaami lahaa labadii ciyaartoy ee ugu fiicna tartankii ciyaaraha Gobollada ee ugu dambeeyay Cabdiraxmaan Ilkacase oo Gobollka Hawd ahaa iyo Ammiin oo Gobollka Daad-Madheedh u ciyaarayay.
Kooxda Goodir yaad odhan lahayd ciyaartoydii ugu fiicnaa ee aan soo mari doonin abid waa kuwaas, wakhtigan iyo wakhtiyadii ka sii horeeyay dhamaan ciyaartoydii soo martay?
Iyadoo ay ciyaartoyo aan la soo koobi karin ay soo mareen haddana waxaan odhan kara kuwa aan dib u soo mari doonin waa Diito, Saleebaan Buffon, Khadar Pelle, Jamaal Jante, Axmed Dugul, Mawliid Thuram, Goolhaye Cabdirisaaq Carab, Cabdiraxmaan Ilkacase, Haybe Good, Kabtan Gabyaaye iyo Sharmarke Yakhii.
Intaadan dalka ka bixin waxaa jiray warar suuqa ku jiray oo sheegayay in khilaaf uu idiin dhaxeeyay adiga iyo kooxdaada Goodir taas maxaa ka jiray?
Runtii markaad ciyaartoy tahay adiga iyo kooxdaada khilaaf laga waayi maayo taasna waanu xalinay ka hor intaanan soo bixin.
Sidoo kale waxaa jiray warar iyaguna sheegayay inaad kala dooranaysay ku biiritaanka kooxaha Gaashaan Duulista iyo Asluubta taasi may jirtay iyaduna? Hadayse ay jirtay kooxdee ayaad ku biiri lahayd?
Runtii wararkaasi waa run oo way jiraan, oo dhawr jeerna taageerayaashaydu way isoo waydiiyeen taas iyagoo qaarna ku faraxsan yihiin qaarna ay ka xun yihiin, laakiin waxaan jeclaal inaan laba kooxood mid u wareego kuwaas oo kala ahaa kooxaha Gashaan iyo Duulista iyo Hawada
Ugu dambayntii waxaad ka mid ahayd ciyaartoyda ugu magaca weyn Dalkeena, gaar ahaan Caasimada Hargeisa maxaad halkan uga gudbin lahayd taageerayaashaadii sida khaaska ahaa kuu taageeri jiray?
Marka hore runtii waxaan u mahad celin lahaa bahda Geeska Afrika sida wanaagsan ee aad u dhiiri-gelisaan guud ahaanba bahda ciyaaraha iyo taageeridiina aad taageertaan kubada cagta, hadaan u soo noqdo jawaabtana waxaan taageerayaashayda meel kasta oo ay dunida ka joogaan aan leeyihiin waan idiin hayaa taageeridiini aad ii hurteen mana ihi qof idin ilaawi doona sidii sharafta lahayd ee aad ii taageeri jirteen Insha Allah waynu isku iman doonaa markale anigoo garoonka ku jira waaanan idin leeyahay markasta guuleysta meel kasta oo aad joogtaan……Dhamaad
‘Sevilla waxay ku dagaalantay isku duubni iyo adkaysi’ – Emery
Xulka Qaranka England ee Koobka Aduunka Oo Lagu Dhawaaqay